Maritiora malagasy voalohany RASALAMA ary anisan'ireo mpianatra andiany voalohany tao amin'ny LMS na London Missionary Society.
Ny fianakaviany dia nonina sy nipetraka tao Manjakaray, izay fitobian'ny mahantra. Ary lasa ho isan'ireo mpiombom-bavaka kristianina tao Ambodin'Andohalo, teo akaikin'ny Rovan'ny mpanjaka izy.
RASALAMA koa dia anisan'ireo malagasy izay natao batisa voalohany, ny volana May 1831; ary nohasinina ho mpandray ny fanasan'ny Tompo, ny 05 Jona 1831, tao amin'ny FJKM Ambatonakanga, izay fiangonana voalohany nijoro tamin'izany.
Ny taona 1835, dia namoaka didy ny mpanjaka RANAVALONA I, fa voarara sy enjehin'ny lalàna ny fivavahana kristianina. Nanomboka teo dia niafina ny kristianina, RASALAMA dia niafina tao anaty lava-bato, teo akaikin'ny trano fonenany. Tratra sy hita tao anatin'ilay lava-bato izy, ny volana Jolay 1837, ka voasambotra ary natolotra ny mpanjaitra "hova" iray, MBA ho andevony.
Niaritra tao izy nandritra ny fotoana maharitra, hatramin'ny andro izay nandavany tsy hiasa ny andro Alahady. Tezitra ilay mpanandevo azy, ka namosaka ny finoany izay voararan'ny lalàn'ny mpanjaka.
Voaheloka ho faty izy noho ny fandavana sy ny fanoherana NY didy navoakan'ny Mpanjakavavy.
Teraka ny taona 1810 izy. Ny 14 Aogositra 1837 kosa, rehefa avy nampijaliana nandritra ny alina manontolo, dia nentina teny Ambohipotsy izy.
Dia an-tongotra izay nataony am-bavaka tsy an-kiato, mandra-pahatongavany teny amin'ny toerana hamonoana azy, izay efa fanta-daza mandrak'ankehitriny.
Rehefa tonga teny Ambohipotsy, dia notrobarana tamin'ny lefona RASALAMA, izay nahafaty azy, navela teo ny razana, ary tsy mba navela hofonosin-damba na nokarakaraina akory ny vatana mangatsiakany.
Taty aoriana moa dia nananganana fiangonana mihitsy ny kristianina teo amin'io toerana namonoana azy io.
Nilentika tao am-pon'ny rehetra sy ny mpiara-miangona taminy NY tantara niainan'i RASALAMA Martiora, indrindra fa ireo Kristianina anglisy; Misy "plaque" marika fahatsiarovana an'i RASALAMA martiora napetraka ao amin'ny "chapelle" BRUNSWICK" ao BRISTOL (ANGLETERRE).
Crée le jeudi 26 avril 2018 à 11:57:09
Nitandrina teto amin’ny FJKM Ambalavao Isotry nandritra ny 23 taona . Nankalazaina ny taona 2017 teo ny faha-90 taonany. [. . .]
Ny FJKM dia Fiangonana « Réformé », protestanta, teraka avy amin’ny fanitsiam-pivavahana niseho t[. . .]